Yakobo Nhoma No 1:1-27
Animia de anigye ba (2-15)
Gyidi a wɔasɔ ahwɛ (3)
Kɔ so fa gyidi bisa (5-8)
Akɔnnɔ de bɔne ne owu na ɛba (14, 15)
Akyɛde pa biara fi soro (16-18)
Muntie asɛm no na momfa nyɛ adwuma (19-25)
Onipa a ɔhwɛ n’anim wɔ ahwehwɛ mu (23, 24)
Ɔsom a ɛho tew na efĩ biara nni ho (26, 27)
1 Me Yakobo,+ Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo akoa, merekyerɛw krataa yi ama mmusuakuw 12 a moabɔ ahwete no. Mikyia mo! 2 Me nuanom, sɛ muhyia sɔhwɛ ahorow a, mummu no anigye koraa,+ 3 na munhu sɛ wɔsɔ mo gyidi hwɛ saa a, ɛbɛma mode animia agyina ɔhaw ano.+ 4 Nanso momma animia no nwie n’adwuma na moawie pɛyɛ adi mu wɔ biribiara mu a hwee nhia mo.+ 5 Enti sɛ mo mu bi hia nyansa a, ma ɔnkɔ so mmisa Onyankopɔn,+ na ɔde bɛma no,+ efisɛ oyi ne yam kyɛ nnipa nyinaa ade a animtiaabu* biara nnim.+ 6 Nanso ma ɔnkɔ so mfa gyidi mmisa;+ ɛnsɛ sɛ n’adwenem yɛ no naa koraa,+ efisɛ nea n’adwenem yɛ no naa no te sɛ po asorɔkye a mframa de no di akɔneaba. 7 Mma onipa a ɔte saa nnsusuw da sɛ obenya biribi afi Yehowa* hɔ; 8 ɔyɛ onipa a n’adwene nsi pi,+ na ohinhim wɔ n’akwan nyinaa mu. 9 Na ma onua a ɔyɛ mmɔborɔwa* nni ahurusi sɛ wɔama no so,+ 10 na ɔdefo nso nni ahurusi sɛ wɔabrɛ no ase,+ efisɛ ɔdefo betwam akɔ sɛ wuram nhwiren. 11 Sɛnea owia pue a ɛbɔ denneennen na ɛhyew wura ma ne nhwiren po na n’ahoɔfɛ sɛe no, saa ara na ɔdefo begyaw nneɛma a odi akyi no hɔ akɔ.+ 12 Anigye ne nea omia n’ani gyina sɔhwɛ mu,+ efisɛ sɛ wogye no tom a, ne nsa bɛka nkwa abotiri+ a Yehowa* ahyɛ bɔ sɛ ɔde bɛma wɔn a wɔkɔ so dɔ no no.+ 13 Obiara a sɔhwɛ bɛto no no, ɛnsɛ sɛ ɔka sɛ: “Onyankopɔn na ɔresɔ me ahwɛ.” Efisɛ obi ntumi mfa bɔne nsɔ Onyankopɔn nhwɛ, na ɔno nso nsɔ obiara nhwɛ. 14 Mmom nea ɛsɔ obi hwɛ ne n’ankasa akɔnnɔ a ɛtwetwe no na ɛto no brada.*+ 15 Afei sɛ akɔnnɔ no nyinsɛn a, ɛwo bɔne; na sɛ bɔne nya ba a, owu na edi so.+ 16 Me nuanom adɔfo, mommma wɔnnnaadaa mo. 17 Akyɛde pa ne akyɛde a edi mu biara fi soro;+ efi hann Agya no nkyɛn;+ ɔno de, ɔnsakrasakra te sɛ sunsuma a ennyina faako.*+ 18 Ne pɛ nti, ɔde n’asɛm a ɛyɛ nokware no+ woo yɛn sɛ yɛmmɛyɛ sɛ n’abɔde mu aba a edi kan.+ 19 Me nuanom adɔfo, munhu eyi: Obiara nyɛ ntɛm ntie asɛm; mma ɔmmpere ne ho nnkasa+ anaa ɔmmpere ne ho mmfa abufuw,+ 20 efisɛ onipa abufuw nna Onyankopɔn trenee adi.+ 21 Enti montow efĩ nyinaa ne bɔne biara* ngu,+ na mommrɛ mo ho ase mma wonnua* asɛm no wɔ mo mu, na ɛno na ebetumi agye mo* nkwa. 22 Momfa asɛm no nyɛ adwuma;+ munntie asɛm no kɛkɛ mmfa nsusuwii hunu nnnaadaa mo ho. 23 Na sɛ obi tie asɛm no na wamfa anyɛ adwuma a,+ ɔte sɛ onipa a ɔhwɛ n’anim* wɔ ahwehwɛ mu. 24 Ɔhwɛ ne ho na ɔkɔ, na ntɛm ara ne werɛ fi sɛnea ɔte. 25 Na nea ɔhwehwɛ ahofadi mmara a ewie pɛyɛ+ no mu yiye na ɔtena mu no, wabɛyɛ obi a ɔde asɛm no yɛ adwuma, na ɔnyɛ obi a otie asɛm no a na ne werɛ afi; n’ani begye sɛ ɔreyɛ saa.+ 26 Sɛ obi bu ne ho sɛ ɔsom Onyankopɔn* nanso ɔnhwɛ ne kasa yiye*+ a, ɔredaadaa ne koma, na onipa a ɔte saa no som yɛ ɔkwa. 27 Ɔsom* a ɛho tew na efĩ biara nni ho yɛn Nyankopɔn ne Agya no ani so ne sɛ obi bɛhwɛ nnyanka+ ne akunafo+ wɔn ahohia mu,+ na watwe ne ho afi wiase nkekae ho.+
^ Anaa “ahohora.”
^ Anaa “onua a onni bi.”
^ Anaa “eyi no sɛ afiri.”
^ Anaa “sunsuma a ɛsakra na ɛdannan nni ne mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ne bɔne mmoroso.”
^ Anaa “wɔntɛw.”
^ Anaa “n’animdua.”
^ Anaa “ɔyɛ onyamesomfo.”
^ Anaa “ɔnto ne tɛkrɛma nnareka.”
^ Anaa “Nyamesom.”